ONIVERSITEN’ANTANANARIVO : Manambana ny fikatsoan’ny fampianarana
Hatreto dia tsy mety ho afa-po amin’ny fitakiany ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra sampana Antananarivo. 4 octobre 2019
Manambana ny hanao fitokonam-be indray izy ireo amin’ny herinandro ho avy io. Fantatra fa efa nisy ny fe-potoana folo andro nomeny ny Minisitera mpiahy azy ireo mba hamaliana ireo fangatahana. Tapitra omaly anefa io fe-potoana io saingy tsy nisy nivaingana ny zavatra notakiana. Nanao fanambarana indray ny Seces fa manome 72 ora ho an’ny Minisitera ary raha toa ka tsy misy ny valin-teny mahafa-po avy amin’ity farany dia hiroso amin’ny hetsika lehibe ny Seces.
Hetsika izay hiafara amin’ny fampikatsoana tanteraka ny fampianarana eny anivon’ny anjerimanontolo. Izany hoe, ny alatsinainy ho avy izao no tapitra io 72 ora io ka ny talata izany dia andrasana izay fanapahan-kevitra ho raisin’izy ireo izay. Raha tsiahivina dia teboka maromaro no angatahin’ireo mpampianatra mpikaroka ao anatin’ny fitokonana hataon’izy ireo. Anisan’izany ny mahakasika ny tambin-karama. Ho lasa sorona indray izany ireo zana-bahoaka mianatra eny anivon’ny Oniversitem-panjakana manomboka amin’ny herinandro.
Lasa tsizarizary mihitsy ny fianaran’izy ireo noho ny fisiana fitokonana lavareny tahaka izao. Ankehitriny, mbola ao anatin’ny famahana olana mamaivay ny minisiteran’ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika manoloana ireny disadisa nitranga tamin’ny fanadinana bakalorea ireny. Izao anefa dia efa hototofan’ny Seces olana hafa indray. Tsy mipetraka intsony ilay fitsinjovana ny tombotsoa ho an’ny mpianatra.